Booliska Somaliland oo Faahfaahin Ka Bixiyey Ciidan Hubeysan oo galay Gobolka Awdal • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Booliska Somaliland oo Faahfaahin Ka Bixiyey Ciidan Hubeysan oo galay Gobolka Awdal
Booliska Somaliland oo Faahfaahin Ka Bixiyey Ciidan Hubeysan oo galay Gobolka Awdal
September 13, 2010 - By: Abdirahman. A
Taliska Booliska iyo Sirdoonka ee maamulka Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalyahano hubeysan oo aan la aqoon haybtooda kuwaas oo soo galay qaybo kamid ah gobolka Awdal.
Taliyaha Ciidanka Somaliland Nuux Taani iyo Taliyaha CID-da oo caawa shir jiraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Ciidanka ay ku hareersanyihin Ciidankaas hubeysan oo la aaminsanyihin in ay ka yimadeen dalka Eritrea laguna soo tababaray,iyadoo labada taliye ay sheegeen in ay qabteen labo kamid ah ciidankaas mid kamid ah dhaawac u yahay.
Taliyaha Ciidanka Somaliland ayaa sheegay in Ciidanka Sirdoonka ay baaritaan ku hayaan mid kamid ah raggii ay qabteen isla markaana dhowaan ay soo bandhigi doonaan natiijada.wuxuu sidoo kale ku hanjabay in Ciidanka Somaliland ay mudo labo maalmood gudahood kusoo afjari doonaan Ciidankaas oo lagu qiyaasay 200 ilaa 300-nin.
Gen.Taani ayaa tilmaamay in ragaas ay u maleynayaan in ay yihin Soomaali,wuxuuna intaas raaciyey in Buurta Maarmaar oo la sheegay in ay ku suganyihin Ciidankaas loo direy Ciidan badan oo gurmad ah kuwaas oo la filaayo in ay dagaal ku qaadan.
Warar badan oo la isla dhexmaraayay ayaa sheegaayay in Ciidankaan ay yihin Jabhadda ONLF.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Dr.Maxamed Cabdi Gaboose ayaa maanta warbaahinta BBC-da u sheegay in ciidankan ay ka soo dageen xeebta u dhexaysa Saylac iyo Lughayha, kadib waxaa kaalmeeyey dad ku sugaayey dhanka xeebta, waxaana ay galeen buuraleyda Maarmaar, Wasiirka ayaa sheegay waqtiga ay soo gaareen gobolka Awdal in ay ahayd Habeenimadii Axaadda oo ku beegnayd 12.09.2010.